ब्लग र ब्लगिङः
साताको ब्लगर को र कसरी?
नेपाल वा विदेशमै रहेर ब्लगिङ गर्ने नेपाली ब्लगरहरुलाई प्रोत्साहन र पहिचान दिनको लागि मेरोरिपोर्टले साताको ब्लगर स्तम्भ शुरु गरेको हो । यो स्तम्भमा हरेक हप्ता नयाँ वा पुराना ब्लगरमध्येबाट एक जनाको अन्तर्वार्ता पोष्ट गरिन्छ । यहाँ फिचर हुनेहरु नयाँ वा पुराना तथा आफ्नै ब्लग बनाएर ब्लगिङ गर्ने स्वतन्त्र ब्लगर वा मेरोरिपोर्टमा ब्लगिङ गर्नेहरु पनि हुनसक्छन्
साताको ब्लगरको छनोटका लागि यस्ता ब्लग र ब्लगरहरुबारे जानकारी दिन मेरोरिपोर्टमार्फत सुचना पनि गरिन्र्छ । यसरी प्राप्त भएका ब्लगहरु वा मेरोरिपोर्टको एडमिन समुहबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा ब्लगिङको नियमितता, ब्लगमा रहेका सामग्रीको मौलिकता तथा ब्लगरसित अन्तर्वार्ता लिने समय र परिस्थितको सुविधा समेत हेरेर हरेक हप्ता कसको अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने निर्णय सम्पादकीय समूहले निर्धारण गर्छ । सम्पादकीय समूहमा विनय गुरागाई, प्रकाश लामिछाने र पवन न्यौपाने हुनुहुन्छ । सम्पादकीय समूहले ब्लगर अफ द विक छान्दा अनौपचारिक रुपमा कहिलेकाँही बिभिन्न ब्लगर र ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुसँग कुराकानी गर्छ र वहाँहरुको राय पनि लिने गरेको छ । माइक्रो ब्लगिङ् साइट ट्वीटरका लोकप्रीय प्रयोगकर्ताहरु पनि कहिलेकाँही ब्लगर अफ दि विकको रुपमा छनौट हुनसक्छन् । यसबारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सम्पादकीय समूहलाई मात्र छ । ब्लगर अफ दि विक सेक्सनमा हामी बिशेषगरी ब्लगिङ् र सोसल मिडियाको कुरा गछौ । त्यसैले छनौटको परिधीलाई ब्यापक बनाउन कहिलेकाँही माइक्रोब्लगरहरु पनि यसमा छनौट हुनसक्नेछन् ।
यसरी साताको ब्लगर बनाउनुका केही उद्देश्यहरु:
१. पुराना ब्लगरलाई पहिचान दिने
२. नयाँ ब्लगरहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने
३. www.meroreport.net को प्रवर्द्धन गर्ने र
४. ब्लगिङ् र न्यु मिडीयाबारे बहस सिर्जना गर्ने।
सम्पादकीय समुहले साताको ब्लगर छान्दा पनि थोरबहुत यीमध्ये केही वा सबै उद्देश्य पुर्ति हुनेगरी निर्णय गर्छ । यो प्रतिस्पर्धा होइन । यसरी फिचर हुने व्यक्तिलाई मेरोरिपोर्ट साताको ब्लगर भन्ने गरिन्छ । त्यसैले देशभरकै साताको उत्कृष्ट ब्लगर वा त्यस्तो केही भन्न खोजिएको होइन ।
हालसम्म मेरोरिपोर्टमा फिचर भएका ब्लगरहरुको अन्तर्वार्ता पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
South Korea helps Nepal to buildahealth insurance system for universal health coverage October 30, 2017 12:54 PM
मध्यरात बिदाईको बात !! October 30, 2017 12:53 PM
नागरिक समाजका संस्थाविच सञ्जाल गठन October 30, 2017 12:53 PM